Multivarka Redmond RMC-02: imanyuwali yomsebenzisi, Ukubuyekeza izindlela, ukubuyekezwa ikhasimende
Multivarka - idivaysi njalo kwakudingeka uwayehlalise. Mangisho ukuthi kuyoba usizo kubantu abasha futhi asebekhulile. Endabeni ethile, idivayisi ngeke umsindise isikhathi namandla, kakade isafa ngemva komsebenzi onzima wosuku. Ezitolo njengamanje ukuthengisa ibanga elikhulu multivarok ezahlukene. Bonke ezahlukene design, izici ezikhona kanye nezinye izici lobuchwepheshe. Nokho, incazelo kuzo ayiguquki - lula umsebenzi futhi inciphise isikhathi esichithwa ekhishini. Uma idivayisi usulungile, umnikazi ungakhululeka, ukuchitha isikhathi nomkhaya wakho noma anakekele yena.
Kulesi sihloko, sizokhuluma le multivarka ezahlukene Redmond RMC-02. Sekuyisikhathi eside wokwakha uthola okubuyayo kubanikazi. Kuzofundwa ezilandelayo: imfundo, zonke izici ezitholakala kule divayisi namazwana ayo. Mangisho ukuthi multivarka eyakhishwa ngo-2013, ngakho-ke, ukuthole esitolo kuyoba nzima, kodwa kungenzeka.
Isihloko kuzosiza unqume ukuthi ukuthenga Redmond RMC-02. Ngaphambi kokuqala ukubuyekeza, kubalulekile ukwengeza ngokuthi umakhi wayo enedumela elihle. Uveza amelana umonakalo mechanical kuya iyunithi ngokuphila isikhathi eside. Nalokhu mkhiqizo okulula bayakhohlwa imisebenzi evamile yansuku zonke nakanjani kuphakama ngesikhathi yokupheka. Ngenxa isiqalo ilibele ingalandwa ngesikhathi sokulala esitsheni ukudla ekhethekile, ngokubeka timer kudivayisi. Ekuseni vuka kubanikazi ayovulelwa ibhulakufesi. Multivarka edayiswa imibala emibili, ngakho umthengi unethuba ukhethe okukhethwa kukho oyifunayo.
Express ubisi iphalishi nelayisi (okusanhlamvu)
Ezinye imibuso kukhona esetshenziswa kakhulu. Multivarka Redmond RMC-02 (black version kuyinto sangempela) eyosisiza ukuba silungiselele izinhliziyo isiphi isidlo kusheshe kakhulu.
Esikhathini "Express" irayisi nezinye okusanhlamvu kuyoba esihlwabusayo futhi unempilo emva kwemizuzu 35. isiqalo Ibambezelekile ayitholakali. Ungakhubaza avtopodogreva umsebenzi futhi ushintshe isikhathi sokupheka.
ubisi iphalishi imodi yakhelwe ukudala ukudla yezingane. Isilinganiso ukupheka isikhathi - imizuzu 45. Lesi sibalo yezimanga ukwehla noma ukwanda.
Okusanhlamvu ayovulelwa cishe ihora. Nalapha futhi, inkathi Multivarki ingakwazi ukushintsha. isiqalo Ibambezelekile iyatholakala.
Isobho, stewing, ukubhaka yogurt
Kuyadingeka ukuba ukucisha isidlo noma ukupheka isobho? Multivarka Redmond RMC-02 (mhlophe noma lube mnyama - design ezahlukeneyo) enze esikhathini esingaphansi kwehora. isikhathi sokupheka kungashintshwa uma uthanda. Ibanga - imizuzu engu-30. emahoreni angu-8.
Ukubhaka silungiselela ngokwesilinganiso imizuzu lengu-60.
Seyogathi zizokwenziwa emahoreni angu-8. avtopodogreva umsebenzi kukhutshaziwe.
Kufutfumeta ngombhangqwana nengane ukudla
Reheating wenziwa ezingeni lokushisa esingeqile 75 ° C.
Baby ukudla iphekwe in-avareji yamaphesende ihora noma amabili. Kule modi, ungalungisa konke izingane ezincane: amasobho, iphalishi, amasobho, njll ...
I "umbhangqwana" ikuvumela ukudala ukudla imizuzu engamashumi amane. Inqubo ukupheka wenziwa esitsheni akhethekile.
Uma ucabangela elithola, udinga usitshele imishini, esesikhundleni multivarka Redmond RMC-02.
Khombisa aboshelwe idivayisi has backlighting. Imenyu elihunyushwe ngokugcwele ku-isi-Russian. Kulabo abathanda ukupheka futhi asebenzise timer, isibonelo, ekuseni, ngaphambi Awakening wakhe, wakha umsebenzi imisiwe isiqalo ekhethekile.
Multivarka ngokwawo icwecwe futhi ephathekayo. Ukubukeka original nephimbo minimalist. Idivayisi okuthengiswa abamhlophe nabansundu.
Abadali ngaphezu kwalokho wakhipha incwadi, okuyinto ibekwe zokupheka 120. Bonke ziwusizo ukulungiswa in the multivarka. Iyatholakala umsebenzi 3D-bafudumale. Iwaranti on imishini - izinyanga 25.
Nazi izindlela ezimbalwa. Iziqondiso zichazwe ngokuningiliziwe ngaphezulu. Ithi i plus isiqiniseko noma lokususa akunakwenzeka, kodwa imisebenzi eminingi eminingi ungathandi.
Multivarka Redmond RMC-02 uyakwazi iminyaka okungenani 5. Lezo zici ichaziwe ngumkhiqizi. Izibuyekezo zabantu mayelana nale divayisi kuzosiza ukunquma uma lokhu kuyiqiniso noma cha.
Ngeshwa, le ithuluzi, ngaphezu ezicini ezinhle, sinezici ezithile ezimbi. Ake sibheke kubo.
Ngo multivarka akukho amahora avamile. Asinakusho lowo it is kakhulu ethile ebalulekile, Nokho, kukhona okunethezekile lapho zakhiwa. Ikhava yangaphakathi singasuki kinid, kunzima ukugeza inqubo. Condensate lokuqoqa kanzima. Lokhu kungenxa yokuthi isitsha akuyona kuye. Kuleso simo, uma kukhona kukagesi, kubalulekile ukuqala inqubo ukupheka kanye ukulawula okokuqala. Abadali akazange kulibona ukuntula yesikhashana umsoco, ngenxa kungenzeka ukuthi awuzange eyakhelwe yokugcina imodi.
Amandla Multivarki Redmond RMC-02 - 400 volts. Umuntu angeke alithole attribute ku-pluses kanye minuses, kodwa kukhona inqubo ekilasini efanayo, okuyinto ngezikweletu ugesi ingasaphathwa. Ubunzima kungaba ukuthola kule divayisi ezitolo noma ku-intanethi. Lokhu kungenxa yokuthi multivarka wadedelwa eminyakeni emithathu edlule. Ngeshwa, manje iza ingxenye encane in isitokwe ezitolo ezahlukene. Nokho, uma uzama, uthola Yiqiniso, kungenzeka.
Ngezinye izikhathi inkinga ukuntuleka nemiyalelo ephelele. Lichaza zonke okuhlukile izilungiselelo zedivayisi. Kodwa lapho kulungiswa multivarka Redmond RMC-02 ukhiqiza nephutha, kuyacaca - eziyalezweni zinikezwa, akuzona zonke izinketho ukuze kususwe yabo.
Wonke umuntu wesibili uthola multivarku esisemqoka ekhishini lisebenze. Abathengi abaningi esisebenzisa njengophawu ekhishini ephathekayo. Uchitha emsebenzini kuyinto amandla kangako. Ngu uqobo, encane, compact, futhi kungaba uyiswe kufanelane nezindawo ezihlukene. Multivarka Redmond RMC-02 (mhlophe noma lube mnyama) isebenzisa amandla kakhulu esingaphansi kagesi abavamile. Yingakho iningi abathengi ziwulalelisise.
Abantu abaningi ungathandi yokuthi azikho amawashi. Nokho, lokhu akuphazamisi inqubo ukupheka. Kukhona umsebenzi "multipovar", oluba umphefumulo ekhaya kakhulu. Ngenxa 3D-Ukushisa ungagwema evutha ukudla, kanye nemikhiqizo ngokwabo ngezithukuthuku lolu hlelo uzilungiselele njalo ngezikhathi ezithile. Zonke izindlela isebenze kahle futhi ngaphandle glitches. value esihle kakhulu imali - lokho bangaki abantu abasabela ngayo. Wanelisekile ngokuthenga kwakho, kanye nabantu abadala kanye nezingane. Ukudla okuphekiwe kule multivarka, esihlwabusayo olungenayo amavithamini.
Kufanele maningakhohlwa lento multivarku. Redmond RMC-02 izilinganiso zazo ikakhulukazi omuhle, siyindlela ezinhle. Zonke Ukucaciswa elishiwo nomkhiqizi - ziyiqiniso. I eseduze izindleko - ruble 3500. Ukuze imali, le divayisi nje isipho.
Mini umshini wokuhlanza: umsizi wakho kancane endlini